Ama-Buzzwords wokumaketha avela ku-Mashable | Martech Zone
Abantu eMashable bahlanganise le infographic on Izinsuku ezingama-30 zamaBuzzwords wokumaketha. Njengomfana ongakwazi ukuma ukumaketha khuluma, Ngiyabonga njalo lapho sibheka kahle ukumaketha BS. Ngizothembeka, nokho, futhi ngivume ukuthi ngicabanga ukuthi le infographic kungenzeka ukuthi igcwele ngakho.
Imigomo efana ukumaketha okudala, infographic futhi ukukhuliswa azikho ukumaketha kwezimpawu, yimigomo yangempela leyo yonke imakethe edinga ukuyiqonda ngokugcwele. Futhi inkinga yami enkulu yileli gama Buyisela ku-Investment ukufakwa ohlwini njengegama eliyimpicabadala. I-ROI akuyona ibuzzword… iyisidingo esiphelele. Siyaqhubeka nokubona ama-ejensi namabhizinisi angaqapheli ukubuya kwawo ekutshalweni kwehluleka. Futhi lapho i-ROI yabo yehluleka, ibulala ibhizinisi labo - hhayi ukumaketha kwabo kuphela.
Amanye amagama amanye angama-buzzworthy, kepha noma kunjalo akukubi kangako. Ngiyalithanda igama lokuqukethwe okulula ukudla… sivame ukubhekisa kwimigraphics - infographics egxile kakhulu kucezu olulodwa lwedatha kunendaba yonke. Okuqukethwe okulula ukudla kuzwakala kangcono futhi kukhomba ekuziphatheni kokuthi kusetshenziswa kanjani. Iziphakamiso zamavelu nama-KPI nawo angaba ngama-buzzwords kepha abalulekile njengoba abathengisi begxila kumyalezo wabo futhi balinganisa imiphumela.
Tags: Umkhankaso we-360ukumaketha okudalaidatha enkuluukuchofozaukumaketha kwezimocpli-curatorukwenza ngokwezifisoimidiya etholakelelwekucocisanaukukhuliswaukukhwabanisa okukhulaumbonoisipiliyoni sokuntywilainfographicKPIukukhangisa kwendabukop-ezentengiselwanoRIOisikrini sesibiliukubukisaokuqukethwe okulula ukudlaezentengiso yenhlaloi-solomoukuhlanganaumholi wokucabangaizingxoxo ezimbilivalue valueviral
UJun 2, 2013 ngo-8: 03 AM
Thanda uhlu lwakho, lawo magama awajwayelekile kimi, ngakho-ke ngicabanga ukuthi kuyasiza kakhulu ukuwaqonda kabanzi.
URick Noel, i-eBiz ROI, Inc.
Jun 7, 2013 ku-10: 05 PM
Uhlu oluhle futhi olujabulisayo uDoug. Iningi lethu linecala lokusebenzisa okungenani imishwana embalwa yale mishwana. Kungikhumbuza ngomdlalo wobumbano wama-90s wokugcina abiza iBuzzword Bingo. Ilungele izingcingo ezinde zokuthengisa noma imihlangano ebanzi yenkampani. Abanye bangakhumbula. Noma kunjalo kungenza ngibe nobuso lapho ngicabanga ngakho. Ngiyavumelana nawe mayelana nokuthi i-ROI iyisidingo, kepha ngiyavuma ukuthi ngiyabandlulula